ကျွန်ုပ်တို့သည်“ လူတိုင်းရွေးချယ်ကြပါသည်! Ryuko Memorial Collection” လူကြိုက်များသောမဲကိုကျင်းပနေသည်။ Ryuko Memorial
2021 / 04 / 11 ကြွားသည်
Reiwa ၏ ၃ နှစ်ဇူလိုင်လ ၄ ရက်အထိကျင်းပခဲ့သော“ Kawabata Ryuko ၏ Institution မှပြပွဲပန်းချီကားသစ်Starရာမကြယ်ပွင့်အဖြစ်ခေတ်ပြိုင်” ပြတိုက်တွင်“ လူတိုင်းရွေးချယ်သည်! Ryuko သတိရအောက်မေ့ခန်းမစုဆောင်းခြင်း” ထွက်သယ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။
visitors ည့်သည်များထံမှရရှိသောလူကြိုက်များသည့်စစ်တမ်းများကို အခြေခံ၍“ လူတိုင်းရွေးချယ်သည်။
ကျေးဇူးပြုပြီး Ryuko Kawabata ရဲ့အလုပ်ကိုပူပြင်းတဲ့သတင်းစကားတစ်ခုပို့ပေးပါ။